Dalalka ay ka socdaan ciidamada AMISOM oo ansixiyay qorshaha ka bixista Soomaaliya - Halbeeg News
Dalalka ay ka socdaan ciidamada AMISOM oo ansixiyay qorshaha ka bixista Soomaaliya
MUQDISHO (HALBEEG)- Dalalka ciidamadooda ay qeybta ka yihiin Howlgalka Nabad-ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), ayaa taageeray qoraal ay diyaarisay AMISOM oo ku saabsan istiraatiijiyadda kala guurka ah iyo qorshaha bixitaanka AMISOM, si ay ugu wareejiyaan awoodda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
Aragtida howlgallada cusub ee dhowaan la sameeyay ayaa hagi doonta guud ahaan howlgallada ay sameeyn doonaan ciidamada AMISOM waqtiga u dhexeeya 2018-2021 kaasoo ah wajiga ugu danbeeya ee howlgallada AMISOM iyo qorshiha ay uga bixi lahaayeen Soomaaliya.
Taliyaasha ciidamada siddeed dal oo ay ciidamo ka joogaan Soomaaliya ayaa ansixiyay qoraalkan.
War saxaafadeed ay soo saartay AMISOM ayaa lagu sheegay in siddeed taliye boolis oo kala matalayay dalalka Jabuuti, Itoobiya, Uganda, Kenya, Burundi, Sierra Leone, iyo Nigeria ay saxiixeen qoraalkan.
“Guddiga iskuxirka howlgallada militari ee AMISOM ayaa meelmariyay qoraalkan kala guurka ah oo hagi doona guud ahaan howlgallada AMISOM iyo habka howlgaladaasi loo fulinayo” ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ay AMISOM Muqdisho ka soo saartay.
Sida lagu sheegay warsaxaafadeedkan taliyayaasha ciidamada AMISOM waxa ay dowladda federaalka Soomaaliya ku dhiirigeliyeen in ay sameyso awoodsiin oo ay xoojiso ciidamadeeda xoogga dalka, si ugu danbeyn ciidamada ay awood ugu yeeshaan la wareegidda amniga dalka.
Taliyihii ciidanka xoogga qeybta 12-ka Abriil oo qarax miino lagu dilay
NISA oo sheegtay iney gacanta ku soo dhigtay xubno al-Shabaab ah iyo qalab milatari